Ku Saabsan Asxaabta Qoyska | Toddobaadka Wadnaha | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Saaxiibbada Qoysku waa hay'ad samafal oo Minnesota ah oo ay IRS u aqoonsan tahay inay tahay 501 (c) 3 shirkad iyo Gobolka Minnesota sidii urur cashuur dhaaf ah. Waxaa ka diiwaangashan Xeer Ilaaliyaha Guud ee Minnesota lacagaha lagu dalbado. Wax lacag ah lagaama qaado adeegyada laakiin waxay kuxirantahay tabarucaadka shaqsiyaadka, aasaaska, shirkadaha iyo ururada bulshada.
Lacagta ugu badan ee laga helo Asxaabta Qoysaska waa Minnetonka Dugsiga Sare ee dowladda oo aruurisa lacagaha “Isbuuca Wadnaha” ee Febraayo sanad walba.
In kabadan 100 macallimiinta Dugsiga Dagmada iyo shaqaalaha kale ayaa u qorsheeya lacago loogu talo galay asxaabta qoyska iyada oo loo marayo deeqaha tabaruca ee United Way.
Kutukada Ridgewood waxay taageertaa Saaxiibada Qoyska iyada oo u mareysa miisaaniyad howleedkeeda iyo bixinta xafiis xafiis iyo taageero maamul.
Tabarucayaasha shaqsiyeed waxay ku taageeraan saaxiibbada Qoyska tabarucyo toos ah iyo tabarucyo United Way oo loo maro loo shaqeeyeyaasha.
Dhawr hay'adood oo tabaruc ah ayaa bixiya deeqo.
In kabadan 95% lacagaha 'Saaxiibada Qoyska' waxaa loo adeegsadaa barnaamijka fidinta iyo kaalmada maaliyadda tooska ah.
Cunto ilaa Dugsiga Sare ee Minnetonka:
Saaxiibada qoyska waxay la wadaagaan Caribou si ay u siiyaan cunno ardayda dugsiga sare ee Minnetonka ee aan haysan ilo quraac quraacda guriga ah.
Saaxiibbada Qoyska waxay kafaala-qaadaan baabuurta ilkaha ilkaha ee ardayda khatarta ku jira ee MHS ee la aqoonsaday, la baaray iyo la daaweeyay oo ay ka mid yihiin buuxinta.
Saaxiibbada qoyska waxay ka caawiyaan helitaanka ballamaha, gaadiidka iyo diyaarinta baaritaanno caafimaad iyo u diritaan ardayda halista ku jira iyagoon helin daryeel caafimaad. Saaxiibada qoysku waxay sidoo kale iskaashi la sameeyaan Naadiyada Libaaxyada si ay u helaan imtixaanno indhaha iyo muraayadaha indhaha ee ardayda halista ku jira.
Abaalmarinno Samaariya wanaagsan:
Saaxiibbada Asxaabta waxay la wadaagaan Minnetonka Booliiska si ay abaal-marin u siiyaan ardayda ka baxday jidkooda si ay u caawiyaan kuwa kale.
Shaqaalaha wacyigalinta qoyska Asxaabta ayaa maalin walba jooga dugsiga sare iyo xarumaha dhexe ee dugsiga si ay u dhagaystaan ulana wadaagaan ardayda. Shaqaalaha wacyigelinta waxay la xiriiraan ardayda u baahan dhiirigelin iyo taageero inay ku guuleystaan guriga, dugsiga iyo bulshada dhexdeeda.
Caawinta Maaliyadeed ee Tooska ah:
Saaxiibada qoysku waxay caawiyaan ardayda halista ku jirta iyo qoysaska iyagoo bixinaya dharka, qadada ardayda, khidmadaha fasalka, khidmadaha isboortiga, iyo khidmadaha howlaha dugsiga marka lagu daro gaadiidka iyo kharashyada guryaha sida kirada iyo tasiilaadka.
Saaxiibbada Qoysku waa qayb muhiim ah oo ka tirsan kooxda dhibaatada dugsiga sare ee Mtka ee wax ka qabata dhibaatooyinka ardayda iyo shaqaalaha
Taageero iyo dhiirigelin socota
Saaxiibada qoysku waxay bixiyaan taageero qofeed oo muddo dheer iyo caawimaad maaliyadeed markii ay jiraan arrimo qoys iyo arrimo dhaqaale. Tani badanaa waxay ka dheertahay baaxadda dhibaatada degdegga ah marka loo eego waqtiga iyo goobta.
Barnaamijyada xagaaga xagaaga ee Minnetonka:
Saaxiibada qoyska waxay la wadaagaan Cub Foods iyo Carsbou si ay u siiyaan cunno fudud iyo cabitaanno sidoo kale dhiirigelin iyo taageero maalinle ah ardayda (oo dhammaantood ka dambeeya shuruudaha qalin-jabinta).
Barnaamijka Xagaaga ee Bulshada:
Saaxiibada qoysku waxay la shaqeeyaan barnaamijyada bulshada ee mashaariicda guryeynta dadka dakhligoodu yar yahay iyagoo siiya taageero iyo cunno fudud dhalinyarada iyo qoysaskooda.
Saaxiibbada Saaxiibada Qoyska ah ee la shaqeeya Timber Bay, Tree House, iyo Bren Road Alternative School kuwaas oo leh barnaamijyo wada jir ah annaga oo nala jooga jimicsiga Ridgewood Church.
Toddobaadka Wadnaha /